Wararka - Waxyaabaha Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Wax Ku Beddelka Warbaahinta Fibre Optic
Kobaca la filayo ee isgaarsiinta maanta, hawl wadeenada shabakadu waa inay la kulmaan kororka sii socda ee taraafikada xogta iyo baahida sii kordheysa ee xaddiga tareenka iyadoo si buuxda looga faa'iideysanayo maalgashiga kaabayaasha shabakadda ee hadda jirta. Halkii cusbooneysiin qaali ah oo dib loogu cusbooneysiin lahaa fiilooyinka, beddelayaasha warbaahinta fiber optic waxay bixiyaan xal wax ku ool ah iyagoo kordhinaya nolosha xarigga qaabaysan ee jira. Sidee qalabka wax lagu beddelo ee fiber optic uu ku gaari karaa tan? Maxaadse ka ogtahay arrintaas? Maanta, qodobkaan wuxuu wax kaaga sheegi doonaa wax ku saabsan qalabka wax ka beddela warbaahinta fiber optic.
Waa Maxay Fibre Osawir Beddelaha Warbaahinta?
Fiber optic media converter waa aalad shabakad fudud ah oo isku xiri karta laba nooc oo warbaahin kala duwan ah sida lammaane qalloocan oo leh fiilo fiber optic. Shaqadeedu waa in loo beddelo calaamadaha korantada ee loo isticmaalo xarigga shabakadda naxaasta ah (UTP) ee loo yaqaan 'UTP' oo loo beddelo mowjado iftiin ah oo loo adeegsaday fiilooyinka fiber optic. Beddelaha warbaahinta fiber optic wuxuu fidin karaa masaafada gudbinta ee fiberka ilaa 160 km.
Maaddaama isgaarsiinta fiber optic ay si deg deg ah isu beddeleyso, beddelka warbaahinta fiber optic wuxuu bixiyaa hijro fudud, dabacsan, iyo dhaqaale oo loogu talagalay shabakadaha mustaqbalka ee caddeynta fiber optic. Hadda waxaa si ballaaran loogu isticmaalay aagagga gudaha, isku-xirnaanta goobta iyo codsiyada warshadaha.
Noocyada Caanka ah ee Fibre OWareeg Media
Beddelayaashu maanta waxay taageeraan borotokoollo isgaarsiineed xog badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin Ethernet, PDH E1, RS232 / RS422 / RS485 iyo sidoo kale noocyo badan oo fiilooyin ah sida lammaano qalloocan, multimode iyo halbeegga halbeegga ah iyo halbeellada halbeegga ah. Oo waxaa lagu heli karaa iyagoo wata naqshado kala duwan oo suuqa ku xiran hadba hab-maamuuska. Beddelaha warbaahinta warbaahinta ee naxaas-ka-fiber, qalabka wax-ka-beddelashada warbaahinta ee fibaar-iyo-fiber iyo qalabka is-beddelka warbaahinta ee silsiladda-ilaa-fiber ayaa ah qayb ka mid ah. Halkan waxaa ku yaal hordhac kooban oo ku saabsan noocyadan caadiga ah ee beddelaha warbaahinta fiber optic.
Marka masaafada udhaxeysa laba aalad shabakadeed ay ka badato masaafada gudbinta ee cabling copper, isku xirnaanta fiber optic ayaa sameynaysa farqi weyn. Xaaladdan oo kale, u-beddelashada naxaasta-illaa-fiber-ka iyadoo la adeegsanayo beddelayaasha warbaahinta waxay awood u siineysaa laba qalab shabakadeed oo leh dekedo naxaas ah inay ku xirnaadaan masaafo dheeri ah iyada oo loo marayo fiilooyinka fiber optic.
Beddelaha warbaahinta ee Fibre-to-Fiber wuxuu bixin karaa isku xirnaan u dhaxeysa hal-qaab iyo fiilooyinka multimode, iyo inta udhaxeysa laba-fiber iyo hal-qaab-feybeed. Ka sokow, waxay taageeraan beddelaad hal dherer oo kale. Beddelaha warbaahintaani wuxuu awood u siinayaa isku xirnaanta masaafada dheer ee udhaxeysa shabakadaha fiber-ka kala duwan.
Beddelayaasha warbaahinta ee Serial-to-fiber waxay u oggolaanayaan calaamadaha RS232, RS422 ama RS485 in lagu gudbiyo xarkaha fiber optic. Waxay bixiyaan fidinta fidinta isku xirnaanta borotokoolka taxanaha ah. Intaa waxaa sii dheer, rogayaasha warbaahinta ee taxan-ilaa-fiber-ka waxay ogaan karaan heerka calaamadaha baud ee isku-xirnaanta aaladaha taxanaha-buuxa ee si otomaatig ah. RS-485 feylasha rogayaasha, RS-232 badalayaasha fiber-ka iyo RS-422 badalayaasha fiber-ka ayaa ah noocyada caadiga ah ee badalayaasha warbaahinta taxanaha ah-ilaa-fiber.
Talooyin ku saabsan doorashada Fibre Beddelaha Warbaahinta Optic
Waxaan aqoon u leenahay noocyada caamka ah ee loo yaqaan 'fiber optic media converters', laakiin sida loo doorto mid ku habboon weli shaqo fudud ma ahan. Halkan waxaa ku yaal tilmaamo fudud oo ku saabsan sida loo doorto qalabka wax lagu beddelo ee fiber optic media.
1.Ma cadee in jajabka qalabka wax lagu beddelo ee fiber optic-ga ahi ay taageerayaan labada qaybood ee kala-badh iyo dabaqyada buuxa. Sababtoo ah haddii qalabka wax lagu beddelo warbaahinta kaliya ay taageeraan nidaamka nus-dhismeedka, waxay sababi kartaa luminta xogta culus markii lagu rakibo nidaamyo kale oo kala duwan.
2.Is cadee heerka xogta aad ubaahantahay. Markaad doorato qalabka wax lagu beddelo ee loo yaqaan 'fiber optic media', waxaad u baahan tahay inaad iswaafajiso xawaaraha beddelayaasha labada dhinacba. Haddii aad u baahatid labada xawaare, waxaad tixgelin siin kartaa laba-rogayaasha warbaahinta ee labada qiime leh.
3. cadee in qalabka warbaahinta uu la jaan qaadayo heerka IEEE802.3. Haddii aysan ka soo bixin heerka, waxaa jiri doona arrimo iswaafajin gebi ahaanba, taas oo u horseedi karta dhibaatooyin aan loo baahnayn shaqadaada.